ချမ်းအေးဝင်း | Myanmar Mp3 Album
Home / Myanmar Artist / အဆိုတော် (ကျား) / ချမ်းအေးဝင်း
Category Archives: ချမ်းအေးဝင်း
Chan Aye Win
Rock VS Rap2– MYMC Playlist
Rock သီချင်းကြိုက်သူတွေရော၊ Rap သီချင်းကြိုက်သူတွေပါ ခံစားလို့ရအောင် သီချင်းကောင်းတွေစုထားတဲ့ rockvsrap2 playlist ပါ။ Rock မြင်နေခွင့်လေးပေး – အောင်ဖြိုး အချစ်နဲ့အလွမ်း – Cobra အမှတ်တရညနေ – G Latt ၀မ်းနည်းတတ်တဲ့ချစ်သူ – Idiots ငါ့ဘက်ကမှားတာပါ – လင်းလင်း အလွမ်းသင့်ပန်းချီ – Reason မလွမ်းချင်ဘူး – R ဇာနည် မင်းအတွက်အသက်ရှင်သူ – စည်သူလွင် ကိန္နရာချောင်းခြား အမှာစကား – Orange သိုဝှက်ထားတဲ့ကမ္ဘာ – Drive Rap တမျိုးကြီး – ချမ်းအေးဝင်း | အိမ့်ချစ် Hip Hop တော့ရှိသေးတယ် – ချစ်စိုး အားလုံး … Continue Reading →
March 2, 2011 amedeo စည်သူလွင် ဂျီလတ် အောင်ဖြိုး စောညီညီ ဂျောက်ဂျက် ကျော်ထွဋ်ဆွေ ချမ်းအေးဝင်း လင်းလင်း Cobra Idiots Media Reason 1 Comment
MMHIPHOP Jelly Mix Tape VoL-4
01.Christmas+1 (သားကြီး) 02.Beware (G-Tone Feat:Bigg-Y & PyiThar) 03.Welcome to tha Ghetto (ချမ်းအေးဝင်း & ချမ်းမြေ့ဦး) 04.ဒီလိုလေး (ChilliFamily) 05.I Lov Ur Gal (သိန်းလင်းစိုး Feat:ကျော်ထွဋ်ဆွေ) 06.အထင်မကြီးဘူး (New Version) (MC.Freddy) 07.မင်းတစ်ယောက်ထဲ (MHL) 08.မိုင်အဝေး (ကျော်ထွဋ်ဆွေ & လွမ်းပိုင်) 09.အသုံးမ၀င်တဲ့ငါ (ရဲရင့်အောင် feat:ဇေရဲ) 10.Run mo` Fucker (လန်ဘား feat:သားကြီး) 11.foever missing You (Q ကြီး (P-Crew)) 12.NOT IMITATE (PrinceY feat:Freddy & ဇေရဲ) 13.အလွတ်သာကဲ (MiSandi & … Continue Reading →
November 12, 2009 mmhiphop အဆိုတော် (အဖွဲ့) အဆိုတော် (ကျား) ကျော်ထွဋ်ဆွေ ချမ်းအေးဝင်း သိန်းလင်းစိုး BiGG-Y Chilli Family Cyclone G Tone MC Freddy Myanmar Artist 1 Comment
1.လူငယ်တွေပဲ (J-me) Downloadlink Mediafire 2.တစ်မျိုးကြီး(ချမ်းအေးဝင်း) DownloadLink Mediafire credit to MMCP
July 17, 2009 Jitki ချမ်းအေးဝင်း J-Me Myanmar Artist Unreleased Albums 1 Comment
ရသ လင်းရာ ချမ်းအေးဝင်း – သုံးယောက်ပေါင်းလောင်းကျော်
၁။ သုံးယောက်ပေါင်းလောင်းကျော် – ရသ လင်းပင်ဟိန်း ချမ်းအေးဝင်း ၂။ ပထမဆုံးချစ်သူ – လင်းရာ Feat: အနဂ္ဂ ၃။ ပျော်အောင်နေ – ချမ်းအေးဝင်း ၄။ နွယ်ပင် – ရသ ၅။ ကိုယ့်အထာနဲ့ ကိုယ်နေ – ရသ Feat: Bigg-Y ၆။ အိပ် – ရသ လင်းရာ ၇။ ပရိသတ် – ချမ်းအေးဝင်း ၈။ အချစ်ပျောက်သူနဲ့အချစ်ကြောက်သူ (၂) – လင်းရာ Feat: Jenny ၉။ ရသ = ဂေါ်တယ် – ရသ ၁၀။ ဖိုတိုစတန်း – ချမ်းအေးဝင်း Feat: ဘိုလေး … Continue Reading →
February 8, 2009 သတ္တမ ဘိုလေး အနဂ္ဂ အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (အများ) ရသ ချမ်းအေးဝင်း လင်းရာ BiGG-Y Jenny Myanmar Artist New Myanmar Albums 51 Comments
အိန်းအိန်း – မင်းဘာလုပ်မှာလဲ
၀၁ အချစ်ကြောင့်…..feat: ခင်ဘုဏ်း ၀၂ အနာဂတ်မဲ့လမ်းဆုံး…..feat: ဇမ်နူး ၀၃ အချစ်ဆုံးမင်းနဲ့ ပဲ…….. ၀၄ ချစ်နေမိသူ….. feat: ရတနာမိုင် ၀၅ မင်းဘာလုပ်မှလဲ…..feat: ချမ်းအေးဝင်း ၀၆ မင်းတစ်ယောက်ကိုပဲ……. ၀၇ ရင်ခုန်စေမယ့်အနမ်း….. feat: နန်းစုရတီစိုး ၀၈ မစဉ်းစားရင်မနေနိုင်…. feat: yar yar ၀၉ ချစ်နေတုန်းပဲ…..feat: ဇမ်နူး ၁၀ ဟိတ် — feat: yar yar ၁၁ ဂိမ်း…..feat: မင်းမြတ် credit to: Jonesein(Myanmar Cupid Forum)
November 4, 2008 mgtaryar အိန်းအိန်း အခွေ (တကိုယ်တော်) ရတနာမိုင် နန်းစုရတီစိုး ဇမ်နူး ခင်ဘုဏ်း ချမ်းအေးဝင်း မင်းမြတ် New Myanmar Albums 12 Comments
၁။ ငါခေါ်သွားမယ် ၂။ သစ်ပင် ၃။ မိုးနဲ့မျက်ရည် ၄။အကုန်ကက ၅။ အခုမုန်းရင် ၆။ လမ်းမတစ်လျှောက် ၇။ ခေတ်ဟောင်းကပွဲ ၈။ အပြင်မှာလဲ ဒီအတိုင်းပဲ ၉။ အေးအေးလေးနေ ၁၀။ ပင်ပန်းခဲ့သမျှ
February 10, 2008 mmsong ဘိုလေး အခွေ (အများ) ရန်ရန်ချန်း ရဲလေး ရသ ငယ်ငယ် စောညီညီ ချမ်းအေးဝင်း J-Me ဗုံဘုံ Gတုန်း 10 Comments
၁။ မြူးကြွနေတယ် – ရန်ရန်ချန်း ဂျေမီ ၂။ တခါတုန်းက – ရသ JENNY ၃။ ငါ့သမီးလေးတော်လိုက်တာ – စန္ဒီမြင့်လွင် ၄။ ၉ ရပ်ကွက် – BiGG-Y ၅။ အတုမခိုးနဲ့(ရည်စားဟောင်း) – ချမ်းအေးဝင် ဘိုလေး ၆။ ကျွန်တော့အကို – စောညီညီ ရ။ လိုက်ကြည့် – ရန်ရန်ချမ်း ၈။ ရှိနေပေးပါ – ရဲလေး ၉။ ဘုရားမကြိုက်တရားမကြိုက် – သာစိုး
January 22, 2008 mmsong ဘိုလေး အခွေ (အများ) စန္ဒီမြင့်လွင် ရန်ရန်ချန်း ရဲလေး ရသ စောညီညီ ချမ်းအေးဝင်း သားစိုး BiGG-Y J-Me Jenny2Comments
၁။ မျက်နှာသစ်ကြသူများ – ဗျောက်အိုး ၂။ ပန်းမိုးသက်တန့် – ရေဗက္က၀င်း ၃။ ခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်မလား – ရေမွန် ၄။ လူဆိုး – ဘိုလေး ၅။ တစ္ဆေ – ချမ်းအေးဝင်း ၆။ Hip Hop ကိုနားမလည်ခြင်း – ရဲလေး / Bambino ရ။ ဒဏ်ရာရလိပ်ပြာ – ငယ်ဆူး ၈။ မိုးသည်းတုန်းမုန်း – ညီသူ / ရေဗက္က၀င်း ၉။ ညနေခင်းရဲ့ကောင်မလေး – Red Energy / မျိုးကို ၁၀။ ကလေးမဟုတ်တော့ဘူး – ဘုတ်ဘုတ် ၁၁။ အနားသတ်မဲ့ – Group Song
January 21, 2008 mmsong ဘိုလေး အခွေ (အများ) ရဲလေး ရည်မွန် ငယ်ဆူး ရေဗက္က၀င်း ချမ်းအေးဝင်း FireCracker Red Energy 1 Comment